အမျိုးသမီး တစ်ဦး ထီးဖြူဆောင်းပြီး ထမိန်ကို စောက်ထိုးဝတ်ကာပုလိပ်ဘက်သို့ လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန်
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်ကြားမှ ပညာသင်ကြားရာမှာ သူမရဲ့ဇွဲရှိမှုအတွက် လေးစားချီးကျူးခံခဲ့ရတဲ့ အသက် ၅ နှစ်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ကောင်မလေး
ဘုန်းကြီးကားနားမှာ ကလေးတွေတွေ့လို့ ကားကို ဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့ သွားလိုက်သောအခါ…
လူပြောများနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ က ၅၀၀ ကျပ်တန် ဇလုံထမင်း ဆိုင်လေးတည်ထောင်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တစေ့တစောင်း
October 26, 2021 aung aungLeaveaComment on ေဂါက္သီးတစ္လံုးေၾကာင့္ ကာမဆႏၵေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ရတဲ့ ေကာင္မေလး
ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ‘ေခ်ာေမာ လွပ’တဲ့ သူ႔ဇနီးကို ေဂါက္ရိုက္ သင္ေပးရင္း ‘ေဂါက္သီးဟာ တဖက္ၿခံက အိမ္ျပဴတင္းေပါက္မွန္ကိုထိၿပီး မွန္ကြဲသြားပါေလေရာ!……။ လင္မယားႏွစ္ေယာက္လည္း အဲ့ဒီ အိမ္ရွင္ကို ေတာင္းပန္ဖို႔ ပ်ာပ်ာသလဲနဲ႔ သြားၾကရတာေပါ့။ တဖက္အိမ္ေရာက္ေတာ့…အိမ္ရွင္လို႔ထင္ရတဲ့လူတစ္ေယာက္က ‘ေရွးေဟာင္းမီးခြက္ေလးတစ္ခုကိုကိုင္ၿပီး အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္လည္း’ မိမိတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ျပဴတင္းေပါက္မွန္ ကြဲသြားတဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါေၾကာင္း မွန္အသစ္ ျပန္လဲေပးပါမယ့္အေၾကာင္း ေျပာၾကတာေပါ့။ အဲ့ဒီမွာ အိမ္ရွင္လူႀကီးက ဘာျပန္ေျပာသလဲ ဆိုေတာ့!… “ေတာင္းပန္စရာ မလိုပါဘူးဗ်ာ က်ဳပ္ ခင္ဗ်ားတို႔ကိုေတာင္ ျပန္ၿပီးေက်းဇူးတင္ေနမိတာပါ။ အမွန္က က်ဳပ္ဟာ… မီးခြက္ေစာင့္နတ္ပါ! ဒီအိမ္ကမီးခြက္ထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ပိတ္မိေနတာ။ ခင္ဗ်ားတို႔ေၾကာင့္ ျပဴတင္းမွန္ကြဲသြားလို႔ မီးခြက္ေအာက္က်သြားေတာ့မွ… က်ဳပ္ ခုလို ‘လြတ္ကၽြတ္’သြားရတာပါ!” တဲ့။ “ဒါေၾကာင့္လည္း ခင္ဗ်ားတို႔ကိုေက်းဇူးဆပ္ခ်င္လို႔ ေစာင့္ေနတာ”ႏွစ္ေယာက္စလုံး လိုရာဆု’ကိုေတာင္းၾကပါ!” […]
October 26, 2021 aung aungLeaveaComment on အမျိုးသမီး တစ်ဦး ထီးဖြူဆောင်းပြီး ထမိန်ကို စောက်ထိုးဝတ်ကာပုလိပ်ဘက်သို့ လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန်
စဉ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပုလိပ္ အနီး အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ထီးျဖဴေဆာင္းၿပီး ထမိန္ကို ေစာက္ထိုးဝတ္ကာပုလိပ္ဘက္သို႔ လမ္းေလၽွာက္သြားေၾကာင္း ျပည္သူ တစ္ဦးမွ သတင္းေပးလာပါတယ္။ ဗားမဲ့ဆရာေတာ္ရဲ့ ကေဝသာရက်မ္းထဲက ယၾတာမ်ိဳးပဲ။ ဒါမ်ိဳးကို မက္မက္စက္စက္ယုံတတ္တာ ဟိုတစ္ေယာက္ပဲ ရွိတယ္။ အာဆမ္မွာ ထိုင္ခုံရဖို႔ျဖစ္မယ္။ (ပ၊လ)နဲ႔ (မ၊အ၊လ) ေရွ႕ဆုံးေနာက္ဆုံး နံတူေနတယ္။ သူ႔ကို ထီးျဖဴလာဆက္သတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ အဲဒီ ထမီေဇာက္ထိုးဝတ္တဲ့ အမ်ိဳး သမီးဟာ အဂၤါသမီးျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။ credit unicode စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ပုလိပ် အနီး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ထီးဖြူဆောင်းပြီး ထမိန်ကို စောက်ထိုးဝတ်ကာပုလိပ်ဘက်သို့ လမ်းလျှောက်သွားကြောင်း ပြည်သူ တစ်ဦးမှ သတင်းပေးလာပါတယ်။ ဗားမဲ့ဆရာတော်ရဲ့ ကဝေသာရကျမ်းထဲက ယတြာမျိုးပဲ။ ဒါမျိုးကို မက်မက်စက်စက်ယုံတတ်တာ ဟိုတစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ အာဆမ်မှာ […]
October 26, 2021 aung aungLeaveaComment on ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်ကြားမှ ပညာသင်ကြားရာမှာ သူမရဲ့ဇွဲရှိမှုအတွက် လေးစားချီးကျူးခံခဲ့ရတဲ့ အသက် ၅ နှစ်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ကောင်မလေး
ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ စာလေ့လာရန်အတွက်အဆင်ပြေတဲ့နေရာရှိရန်အရေးကြီးပါတယ်။ လူအများစုက အိမ်ထဲမှာပဲနေရင်း စာကောင်းကောင်းလေ့လာဖို့ကိုယ်ပိုင်အခန်းရှိကြပေမယ့် Pedicab စက်ဘီးထဲ၌သာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၅ နှစ်အရွယ် May Bayaga အမည်ရှိကျောင်းသူလေးမှာတော့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်း သူမအားပညာတတ်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ထိုအရာကမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူမလို့ယူဆရတဲ့သူမတို့ရဲ့အိမ်ဘေးက သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးစာကြည့်နေခဲ့တဲ့ May ရဲ့ပုံကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး May တို့မိသားစုအကြောင်းကို သတင်းထောက်တစ်ယောက်က အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ May ရဲ့မိသားစုက ဆင်းရဲနွမ်းပါးတာကြောင့် ၎င်းတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိဘဲ စက်ဘီးသေးသေးလေးပေါ်၌သာအတူတူနေထိုင်ကြရပါတယ်။ မိဘဖြစ်သူများကလည်း ၎င်းတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်များကို ၎င်းတို့စုဆောင်းထားတဲ့အမှိုက်များရောင်း၀ယ်တဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်၌သာမှီခိုနေကြရပါတယ်။ ၎င်းတို့ရဲ့စက်ဘီးကသေးငယ်တဲ့အပြင် ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကလည်း စက်ဘီးပေါ်မှာရှိနေတာကြောင့် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ထိုနေရာမှာ May အတွက် စာစနစ်တကျလေ့လာရန်နေရာမရှိနေပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် May က အနီးအနားရှိသစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာသာ စာလေ့လာခဲ့ရပြီး သူမတို့မှာ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေများရှိနေပေမဲ့လည်း ပညာရေးကအရေးကြီးတာကိုသိကြတာကြောင့် ကျယ်ဝန်းတဲ့အိမ်မရှိခြင်းက သူမတို့ကိုစိတ်မ၀င်စားစေဘူးလို့ May က ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ မိဘများကလည်း ၎င်းတို့ဆင်းရဲနေပေမယ့် […]
October 26, 2021 aung aungLeaveaComment on ဘုန်းကြီးကားနားမှာ ကလေးတွေတွေ့လို့ ကားကို ဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့ သွားလိုက်သောအခါ…
အလှူ ညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကို ဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့ သွားလိုက်သောအခါ အလှူမှာ ညတရားပွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း မဏ္ဍပ်ရှေ့ထွက်ထိုင်နေမိချိန်လေး ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကျွန်တော့်က ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှပဲ ဆော့နေကြတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဘုန်းကြီးကားကို သူတို့အင်္ကျီလေးနဲ့ ဖုန်တွေသုတ်ပေးနေတာပဲ။ ခုအချိန်မှာ လူကြီးတွေဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်တွေပဲရှိနေကြပါစေ နောင်တစ်ချိန်လူကြီးဖြစ်လာကြမဲ့ ကျွန်တော့်တို့ရွာက ကလေးလေးတွေရဲ့ ခုလိုစိတ်ဓါတ်လေးတွေတွေ့ရ‌ပြန်တော့လဲ ကြည်နှူးမိရပြန်ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေရဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ ခုလိုလေးဖြစ်ပေါ်လာရတာကလဲ ကျွန်တော်တို့ရွာလေးမှာရှိတဲ့ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်းလေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပါနိုင်ပါလားလို့စဉ်းစားမိရင်း။ အလှူ ညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကို ဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့ သွားလိုက်သောအခါ အလှူမှာ ညတရားပွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း မဏ္ဍပ်ရှေ့ထွက်ထိုင်နေမိချိန်လေး ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကျွန်တော့်က ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှပဲ […]
October 26, 2021 aung aungLeaveaComment on လူပြောများနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ က ၅၀၀ ကျပ်တန် ဇလုံထမင်း ဆိုင်လေးတည်ထောင်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တစေ့တစောင်း
လူပြောများနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ က ၅၀၀ ကျပ်တန် ဇလုံထမင်း ဆိုင်လေး၏တည်ထောင်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တစေ့တစောင်း မြောက်ဒဂုံ ရွှေရတနာရုပ်ရှင်ရုံအနီး ၅၀၀ ကျပ်တန် ဇလုံထမင်းဆိုင်လေးပါ။ အမြတ်ရှာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငွေ ၅၀၀ ကျပ်ရှိယုံဖြင့် ထမင်းတစ်နပ်အတွက်အခက်အခဲမရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်လုပ်လက်စား ကယ်ရီသမား နှင့် အနီးအနား အရှေ့ဒဂုံ ရွှေပေါက္ကံက စားသုံးသူများနှင့် စည်ကားလှပါတယ်။အချို့ကလည်းအားပေးချင်လို့လှူချင်လို့လာရောက်ရှာဖွေစားသောက်ကြတာရှိပါတယ်။ ပိုင်ရှင်လူငယ်ဟာ ယခင်က ကားဝပ်ရှော့ အလုပ်သမား ၁ ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူအလုပ်လုပ်စဉ်အခါက နေ့လည်စာစားချိန်မှာအလုပ်ရှင်ကပေးခဲ့တဲ့ ငွေပမာဏဖြင့်ဗိုက်ဝအောင်စားလို့ရတဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုသွားရောက်စားခဲ့ရသူဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခု ကားအပိုပစ္စည်း ဖြန်ဖြူးတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာလက်ရှိ ကြပ်တည်းခက်ခဲနေကြတဲ့ အလုပ်သမားလက်လုပ်လက်စားများကို ကိုယ်ချင်းစာကာကူညီဖို့ အခုလို ၅၀၀ ကျပ်တန် ဇလုံထမင်းရောင်းချခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အချို့ အဆင်ပြေသူများက ၅၀၀ တန်လာစားကြပြီး ၅၀၀/၁၀၀၀ အစရှိသဖြင့် ဆိုင်မှာ […]
အရေးကြီးသတင်းတွေ ဖုံးသွားလို့ မရောင်ရာဆီလူးနေကြတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်း
October 26, 2021 aung aungLeaveaComment on အရေးကြီးသတင်းတွေ ဖုံးသွားလို့ မရောင်ရာဆီလူးနေကြတဲ့သူတွေကို ဒဲ့ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်း
အရေးကြီးသတင်းတွေဖုံးသွားလို့မရောင်ရာဆီလူးနေကြတဲ့သူတွေကိုဒဲ့ပြောလာတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်း ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းကတော့နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာပြည်သူနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့ပြီးမတရားမှူကိုလက်မခံဘဲဆန့်ကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ရပြီးသရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းကတော့လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာမိသားစုနဲ့အတူရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့မင်းမော်ကွန်းကရန်ကုန်ကအရေးကြီးသတင်းတွေဖုံးသွားလို့ မရောက်ရာဆီလူးနေကြတဲ့သူတွေကိုဒဲ့ပြောလာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းက မန်ယူရုံးတာစောက်အရေးကြီးလို့လားဟဆိုပြီးပေါက်ကွဲလာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi Version ပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းကတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာပြည်သူနဲ့အတူပါဝင်ခဲ့ပြီး မတရားမှူကိုလက်မခံဘဲ ဆန့်ကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ရပြီး သရုပ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်းကတော့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာမိသားစုနဲ့အတူရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မင်းမော်ကွန်းကရန်ကုန်ကအရေးကြီးသတင်းတွေဖုံးသွားလို့ မရောက်ရာဆီလူးနေကြတဲ့သူတွေကိုဒဲ့ပြောလာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်းက မန်ယူရုံးတာစောက်အရေးကြီးလို့လားဟဆိုပြီးပေါက်ကွဲလာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Credit
October 26, 2021 aung aungLeaveaComment on သထုံက တပ်အရာရှိတစ်ဦး စီးနင်းလာတဲ့ အိမ်စီးကား မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီး ၂ ဦးသေဆုံ‌း‌ေကြာင်းအတည်ပြု
သထုံက တပ်အရာရှိတစ်ဦး စီးနင်းလာတဲ့ အိမ်စီးကား တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ၂ ဦးသေဆုံး မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်မှာ တပ်အရာရှိနဲ့ သူ့ဇနီးစီးလာတဲ့ အိမ်စီးကားကို ဒီနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ KNU တပ်မဟာ ၁ နဲ့ သထုံပျောက်ကျားရေးအဖွဲ့က ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့် တပ်အရာရှိနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူတို့ သေဆုံးသွားတယ်လို့ သိရှိရပါသည်။ သထုံမြို့နယ်၊ ထုံးဘိုကြီးရွာရှေ့မှာ ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီ ၃၀ က အိမ်စီးကားကို KNUတပ်မဟာ ၁ နဲ့ သထုံပြည်သူ့ပျောက်ကျားရေးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရာ တပ်အရာရှိနဲ့ ဇနီးသေဆုံးသွားပြီး သေနတ်တစ်လက်နဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး သိမ်းဆည်းရတယ်လို့ သိရပါသည်။ သေဆုံးသွားသူတွေဟာ ပိန္နဲတောတပ်က တပ်ခွဲမှူးနှင့် တပ်ခွဲမှူးဇနီးဖြစ်ပြီး ဒီပစ်ခတ်မှု့အပြီးမှာ ပိန္နဲတောတပ်ကနေ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ သိရှိရပါသည်။ […]
NUG အစိုးရနှင့် အမေရိကန်သမ္မဂျိူးဘိုင်ဒန်၏အကြံပေးဖြင့် တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်
October 26, 2021 aung aungLeaveaComment on NUG အစိုးရနှင့် အမေရိကန်သမ္မဂျိူးဘိုင်ဒန်၏အကြံပေးဖြင့် တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်
NUG – အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ နှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေး တို့ အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေး မတိုင်မှီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ ယာယီသမ္မတ ဒူးဝါးလရှီလ ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဒေါ်ဇင်မာအောင် တို့သည် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေး မတိုင်မှီ အမေရိကန် သမ္မတ ၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေး Mr. Jake Sullivan နှင့် ယနေ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် အာဆီယံ သဘောတူညီချက်(၅) ချက်အပါအဝင် စစ်ကောင်စီ၏ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှု နှင့်ပက်သက်၍ ထိရောက် စွာ ဆောင်ရွက်နိုင် ရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ […]
မြန်မာကို ဖမ်းဆီးခြင်းအမည်ဖြင့် အမေရိကန်နှင့်နေတိုးတပ်ဖွဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်(ရုပ်/သံ)
October 26, 2021 aung aungLeaveaComment on မြန်မာကို ဖမ်းဆီးခြင်းအမည်ဖြင့် အမေရိကန်နှင့်နေတိုးတပ်ဖွဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်(ရုပ်/သံ)
အမေရိကန်နှင့်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက Burmese Chase အမည်ဖြင့် ပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်ခဲ့(ရုပ်/သံ) အမေရိကန်နှင့် နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက နှစ်စဉ် စစ်ရေးပေါင်းစည်းလေ့ကျင်မှု ပြုလုပ်လေ့ရှိရာ ယခုနှစ် စစ်ရေးပေါင်းစည်းလေ့ကျင်မှုကို Burmese Chase အမည်ဖြင့် စက်တင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး US မရိန်းတပ်ဖွဲ့မှ မရိန်းတပ်သားများသည် နေတိုးမဟာမိတ်တပ်သားများနှင့်အတူ မြေပြင်၊ ဝေဟင်နှင့် ရေတပ်တိုက်ပွဲအတွက် ဘက်စုံပေါင်းစည်းလေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားရှိ စစ်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွင် Burmese Chase စစ်ရေးလေ့ ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နှင့်အတူ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်၊ ဆွီဒင်နှင့်နော်ဝေ အပါအဝင် နေတိုး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့မှ Capt. George Gibsonက ” Burmese Chase စစ်ရေးလေ့ကျင်မှုက အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအတွက် ပူးပေါင်း […]
October 25, 2021 aung aungLeaveaComment on ထိုင်းနိူင်ငံနှင့် အာဏသိမ်းသာခြင်းအတူတူ မိမိတို့သာဖိအားပေးခံနေရခြင်းကမဖြစ်သင့်ဟုစစ်ကောင်စီဆို
ထိုင်းနှင့် စစ်အာဏာသိမ်းမှု​ခြင်းအတူတူ ၄င်းတို့ကိုသာဖိအားပေးနေခြင်းသည်မဖြစ်သင့်ဟု စစ်ကောင်စီကိုယ် စား၄င်းတို့ကိုထောက်ခံသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများက အာဆီယံကိုပြော အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံနည်းတူ စစ်ဘက်အာဏာသိမ်းခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းစဥ်ကအာဆီယံအနေဖြင့်ဖိအားပေး အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ မပြုလုပ်ခဲ့ဘဲ ၄င်းတို့ စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကိုသာ နိုင်ငံရေးအရဖိအား ပေးနေခြင်းသည် မဖြစ်သင့်ကြောင်း စစ်ကောင်စီကိုယ်စား ၄င်းတို့ကိုထောက်ခံသည့်နိုင်ငံရေးပါတီများက အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း-ASEAN ထံ ကြေ ငြာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ၄င်းတို့စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် ချမှတ်ထားသည့် အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်များအား အတတ် နိုင်ဆုံး ပူးပေါင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နေသော် လည်း လက်ရှိတွင်အာဆီယံ၏ ရပ်တည်ဆောင် ရွက်ချက်များသည် ယိမ်းယိုင်တိမ်း စောင်းမှုများရှိနေသည်ဟု ထုတ်ပြန်ရေးသားထားသည်။ ထို့ပြင် စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပ ဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အာဆီယံအနေဖြင့်လည်း တည်ဆဲပဋိညာဥ်စာတမ်းများ ပါရှိသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုမည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် ပဋိညာဥ်စာတမ်းတွင် ပါရှိသည့်အ ချက်များကိုကျော်လွန်ပြီး မဟာမိတ်နိုင်ငံများနှင့် သံတမန်များ၏တိုက်တွန်းမှုများကိုရှေ့တန်းတင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် အာဆီယံစည်းလုံးညီ […]